नयाँ काव्यकृति ‘सम्बोधि’ बजारमा - kageshworikhabar.com
११ फागुन, काठमाण्डौ।
‘सानो कविताको झ्यालबाट सानो संसार ।’
साहित्यकार नरेश शाक्यको नयाँ काव्यकृति ‘सम्बोधि’ बजारमा आएको छ । प्रकृति, प्रेम, राजनीति, दर्शन आदि विषयका ४१९ वटा कविता सो कृतिमा समाविष्ट छन् । ती कविता कुनै तीन, कुनै चार र कुनै पाँच हरफका छन् । हाइकू, तान्का शैलीका छोटा यस्ता कवितामा ठूलो भाव र विचार कविले दिन खोजेका छन् ।
सम्बोधिमा समावेश भएका लघुकविता गोलढुङ्गाको पुरानो गुजेश्वरीको बसाइमा लेखिएका हुन् । उहाँ त्यहाँ बस्दा गम्भीर बिरामी भएर मोडेल अस्पतालमा उपचार गराएर फर्किएपछि लेखिएको काव्य हो ।
आकृतिप्रकृति प्रकाशक रहेको यस कृतिको भूमिकामा लेखक सहप्राध्यापक एवम् समालोचक डा हरिप्रसाद सिलवालले कृतिमा असमानताका असरल्ल अनुहारलाई कविताको कला र विचारको बाढीले बगाउँदै र पाइलापाइलामा फुत्किन खोजेका जिन्दगीका धागाहरूमा आशाका रेखाहरू कोरिएको जनाउनुभयो ।
प्रस्तुत लघुकवितामा सशक्त सौन्दर्य चिन्तन झुल्केको छ । मानवलाई मानव भएर बाँच्न दिनुपर्छ अनि वर्गीय उत्पीडनको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने प्रगतिवादी विचारलाई कवि शाक्यले आफ्ना कवितामा आलोकित गर्नुभएको छ । समाजमा रहेका अँध्यारा र उज्याला पक्षहरूको चिरफार गरी जीवनका वास्तविक अनुभूतिलाई सङ्ग्रहमा प्रस्तुत गरिएको उहाँको टिप्पणी छ ।
प्रकाशकका तर्फबाट वैरागी जेठाले कवि शाक्यको सग्लो जीवन अध्ययन गर्दा मानवहृदय पग्लने जनाउनुभएको छ । विसं २०२२ मा बिए उत्तीर्ण कवि जागिरको शिलसिलामा पूर्वी पहाडको विकट गाउँमा पुग्नुभयो ।
वैचारिक धरातलमा उभिनुभएका कवि राजनैतिक दृष्टिकोणले नेकपा (माले)सँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो । पार्टी सङ्गठनको क्रियाकलापमा पनि सक्रिय रहनुभएका उहाँको वामपन्थी सर्जकहरूसँग घुलमिल भइरह्यो । मानसिक रोगले ग्रस्त हुनुभएपछि पार्टीका साथीसँग उहाँको सम्बन्ध विच्छेद भयो ।
समकालीन साथीहरूसँग टाढा हुन पुग्नुभएका कवि शाक्यले उपचारका क्रममा धेरै दुःख भोग्नुभएको छ । काठमाडौँ आएपछि पाटन मङ्गलबजारमा रहेको पुरानो प्राइभेट स्कूलमा शिक्षण पेशामा लाग्नुभएका उहाँ निकै बिरामी भएपछि अध्यापन गराउन छाड्नुभयो ।
कविका हात गोडाहरू लुगलुग काम्छन् । कविको जीवन अवस्था हेरेर कृतिका रूप दिने र उहाँको मनको चाहनालाई उद्धार गर्ने उद्देश्यले आफूले यो कृति प्रकाशन गरिएको साहित्यकार जेठाले जानकारी दिनुभयो । कृति पढेपछि पाठकलाई नयाँ स्वाद दिने उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।
कृतिकार शाक्यले सानासाना कविताबाट आफूले संसारलाई चियाउन खोजेको बताउनुभयो । यसअघि प्रगतिशील साहित्यकार शाक्यका सात वटा कृति प्रकाशन भइसकेका छन् । सम्बोधि आठौँ कृति हो । कवि शाक्यका कवितामा दशर्न भेटिन्छन् । कवितामा उहाँ थोरै शब्दबाट धेरै मानवता बोध गराउने शक्ति प्रदर्शन गराउनुहुन्छ ।
‘सूर्यले आफ्नो तप्त अधरले
प्रेमको स्पर्श गरिदियो’
Previous articleहुवावेद्वारा फोल्ड गर्न मिल्ने मोबाइल फोन सोमबार सार्वजनिक
Next article‘ग्यालेक्सी फोर के’ लिएर आउंदै रवि लामिछाने
शिक्षकले सबै विद्यार्थीलाई समान व्यवहार कहिले गर्ने ?
के हो सफलता ? जीवनमा कसरी सफलता प्राप्त गर्ने ?
छोरी जन्माउनको लागि आमालाई डर लाग्ने नबनाउनु है !
आज सोमबारे औँशी : सोमबारे औँशीको महत्व के छ ? थाहा...
आज सोमबार के कस्ता कामकाजहरु गर्नु शुभ र अशुभ हुन्छ ?...